Vaovao - Ny fitsipika sy ny toetra mampiavaka ny mpitsoka mitsoka simika
Mpiasa mitsoka simika Azo zaraina ho karazany roa lehibe koa ny mpitsoka mitsoka simika: ny akora simika biolojika sy ny akora simika tsy mihombo. Betsaka ny karazana mpitsoka fitrandrahana simika biolojika, raha voafetra kosa ny mpitsoka mitsoka simika. Ireo mpitrandraka simika taloha indrindra (tamin'ny taona 1850) dia karbaona anbôrika an-tsokosoko sy bikarbonato tsotra. Ireo akora simika ireo dia mamoaka CO2 rehefa hafanaina, ary nosoloin'ny asidra bicarbonate sy citric izy ireo nony farany satria ity farany dia misy effet prognostic tsara lavitra. Ireo mpiasan'ny foibem-bolo tsy mandeha amin'ny laoniny tsara kokoa dia manana mekanika simika toy ny etsy ambony ihany. Izy ireo dia polycarbonates (ny original dia Poly-carbonic
asidra) afangaro amin'ny gazy karbonika.
Ny famoahana ny polycarbonate dia fihenan'ny endothermika, amin'ny 320 ° F
Manodidina ny 100cc isaky ny grama ny asidra afaka mivoaka. Rehefa hafanaina hatrany hatrany ny CO2 ankavia sy ankavanana hatramin'ny 390 ° F dia betsaka ny entona mivoaka. Ny toetra endothermika an'ity fihenan'ny lozam-pifamoivoizana ity dia mety hitondra tombony vitsivitsy, satria ny famafana ny hafanana mandritra ny fizotran-javatra dia olana lehibe. Ankoatry ny maha-loharano entona manafoana azy, ireo akora ireo dia matetika ampiasaina ho toy ny mpiorina nukolika ho an'ny mpiasan'ny foama. Inoana fa ireo sela voalohany niforona rehefa lo ny lozisialy mitsoka simika dia manome toerana fivezivezena ny entona alefan'ny mpitsoka mitsoka ara-batana.
Mifanohitra amin'ireo mpiasan'ny foulement tsy mamboly dia misy karazany maro ny agents foulika simika biolojika azo isafidianana, ary samy hafa ihany koa ny endrika ara-batana. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, akora simika biolojika an-jatony maro izay azo ampiasaina ho toy ny mpitsoka mitsoka no nohamarinina. Betsaka koa ny masontsivana ampiasaina hitsarana. Ny tena manan-danja indrindra dia: amin'ny toe-javatra misy ny hafainganam-pandeha azo fehezina sy ny mari-pana azo vinavinaina, ny habetsahan'ny entona mivoaka dia tsy lehibe ihany, fa azo averina azo averina koa; ny gazy sy ny solida vokarin'ny valiny dia tsy misy poizina, ary tsara ho an'ny famolavolana polymerization. Ny zavatra dia tsy tokony hisy vokany ratsy, toy ny loko na ny fofona ratsy; farany, misy olana amin'ny fandaniam-bola, izay critère tena ilaina ihany koa. Ireo agents foulam-bidy ampiasaina amin'ny indostria ankehitriny dia mifanaraka indrindra amin'ireo mason-tsivana ireo.
Ny mpandraharaha mamelombelona amin'ny maripana ambany dia voafantina avy amina mpamokatra simika simika be dia be. Ny olana lehibe tokony hodinihina dia ny hafanan'ny lozam-pifamoivoizana ataon'ny mpiasan'ny foama sy ny hafanana amin'ny plastika. Mpiasa mitsoka simika biolojika roa no neken'ny be sy ny maro ny polyvinyl chloride maripana ambany, polyethylene ambany hakitroka ary résin epoxy sasany. Ny voalohany dia toluene sulfonyl hydrazide (TSH). Ity dia vovoka mavo mamy miaraka amin'ny maripana lo eo amin'ny 110 ° C. Ny gram tsirairay dia mamokatra azota mitentina 115cc ary hamandoana sasany. Ny karazany faharoa dia taolan-tehezana bis (benzenesulfonyl), na OBSH. Ity agents foaming ity dia azo ampiasaina matetika amin'ny fampiharana mari-pana ambany. Ity fitaovana ity dia vovo-dronono fotsy ary ny mari-pana famaohana mahazatra dia 150 ° C. Raha activator toy ny urea na triethanolamine no ampiasaina dia azo ahena ho 130 ° C izany maripana izany. Ny gram tsirairay dia afaka mamoaka entona 125cc, azota indrindra. Ny vokatra matanjaka aorian'ny famoahana ny OBSH dia polymer. Raha ampiasaina miaraka amin'ny TSH izy io dia afaka mampihena ny fofona.
Agnement mihosin-drivotra avo lenta Ho an'ny plastika maripana avo lenta, toy ny ABS mahazaka hafanana, chloride polyvinyl henjana, ny polypropylene index sy ny plastika injeniera mihena ambany toy ny polycarbonate sy nylon, mampitaha ny fampiasana ireo mpitsoka mitsoka miaraka amin'ny mari-pana momba ny lozam-pifamoivoizana mety kokoa. Toluenesulfonephthalamide (TSS na TSSC) dia vovoka fotsy tena tsara dia tsara miaraka amin'ny mari-pana lozam-pifamoivoizana eo amin'ny 220 ° C ary fivoahan'ny entona 140cc isaky ny grama. Izy io dia tena mifangaro azota sy CO2, miaraka amina CO sy amoniaka kely. Ity mpitsoka mitsoka ity dia matetika ampiasaina amin'ny polypropylene sy ABS sasany. Saingy noho ny hafanana lo azy, voafetra ny fampiharana azy amin'ny polycarbonate. Tetrazole 5-tetrazole (5-PT) mifono hafanana avo lenta dia nampiasaina tamin'ny polycarbonate. Manomboka simba miadana eo amin'ny 215 ° C izy, saingy tsy dia lehibe ny famokarana entona. Ny entona marobe dia tsy hafahana mandra-pahatongan'ny hafanana amin'ny 240-250 ° C, ary io maripana maripana io dia tena mety amin'ny fanodinana polycarbonate. Ny famokarana solika dia sahabo ho eo
175cc / g, azota indrindra. Ankoatr'izay, misy derivatives tetrazole sasany eo an-dàlam-pandrosoana. Izy ireo dia manana maripana malaky lo sy mamoaka gazy betsaka kokoa noho ny 5-PT.
Ny mari-pana fanodinana ny ankamaroan'ny thermoplastics indostrialy azodicarbonate dia araka ny voalaza etsy ambony. Ny maripana fanodinana ny ankamaroan'ny thermoplastics polyolefin, polyvinyl chloride ary styrene dia 150-210 ° C
. Ho an'ity karazana plastika ity dia misy karazana mpitsoka mitsoka azo antoka hampiasaina, izany hoe azodicarbonate, fantatra ihany koa amin'ny hoe azodicarbonamide, na ADC na AC raha fintinina. Amin'ny toetrany madio dia vovoka mavo / voasary manodidina ny 200 ° C izy
Manomboka simba, ary ny habetsaky ny gazy vokarina mandritra ny famotehana dia
220cc / g, ny gazy vokarina dia azota indrindra sy CO, miaraka amina CO2 kely, ary misy amoniaka koa ao anatin'ny fepetra sasany. Ny vokatra decomposition matanjaka dia beige. Izy io dia tsy azo ampiasaina ho toy ny mari-pamantarana ny famotehana tanteraka, fa tsy misy vokany ratsy amin'ny lokon'ny plastika mihosotra ihany koa.
Ny AC dia nanjary mpiasan'ny foza be mpampiasa noho ny antony maro. Raha ny famokarana entona dia AC no iray amin'ireo agents manafaingana mahomby indrindra ary ny entona avoakany dia mahomby be. Ankoatr'izay, avoaka haingana ny gazy nefa tsy voafehin'ny fifehezana. Ny AC sy ny vokatra mivaingana misy azy ireo dia akora misy poizina ambany. AC koa dia iray amin'ireo mpamadika famaohana simika mora indrindra, tsy ny fahombiazan'ny famokarana entona isaky ny grama, fa koa avy amin'ny famokarana entona isaky ny dolara no somary mora.
Ho fanampin'ireto antony voalaza etsy ambony ireto, ny AC dia azo ampiasaina betsaka noho ny toetrany lo. Ny mari-pana sy ny hafainganan'ny entona navotsotra dia azo ovaina, ary azo ovaina amin'ny 150-200 ° C
Saika ny tanjona rehetra ao anaty ny sehatra. Ny fampahavitrihana, na ny fiasa fanampiny dia manova ny toetran'ny lozam-pifamoivoizana ataon'ireo mpitsoka simika, ity olana ity dia niresaka momba ny fampiasana ny OBSH etsy ambony. AC mampihetsika tsara lavitra noho ny mpandraharaha mitsoka simika hafa. Misy karazana additives isan-karazany, voalohany indrindra, ny sira metaly dia afaka mampihena ny maripanan'ny decomposition an'ny AC, ary ny ambaratongan'ny fihenam-bidy dia miankina indrindra amin'ny karazana sy ny habetsaky ny additives voafantina. Ho fanampin'izay, ireo additives ireo dia misy effets hafa ihany koa, toy ny fanovana ny tahan'ny famotsorana gazy; na mamorona fotoana fanemorana na fampidirana alohan'ny hanombohana ny fihenan'ny lo. Noho izany, saika ny fomba famoahana entona rehetra ao anatin'io dia azo noforonina tamin'ny fomba artifisialy.
Ny haben'ny sombintsombin'ny AC koa dia misy fiantraikany amin'ny fizotry ny lo. Amin'ny ankapobeny, amin'ny maripana iray, ny lehibe kokoa amin'ny haben'ny sombintsombiny, dia miadana kokoa ny famotsorana gazy. Io fisehoan-javatra io dia miharihary eo amin'ireo rafitra misy activator. Noho io antony io, ny haben'ny sombin'ny AC ara-barotra dia 2-20 microns na lehibe kokoa, ary afaka misafidy araka izay tiany ny mpampiasa. Mpikirakira maro no namolavola ny rafitry ny fampandehanan-dry zareo manokana, ary ny mpanamboatra sasany dia misafidy fifangaroana maro hafa efa nomanin'ny mpanamboatra AC. Betsaka ny stabilizers, indrindra ireo izay ampiasaina amin'ny polyvinyl chloride, ary ny pigment sasany dia hiasa ho toy ny activator ho an'ny AC. Noho izany dia tsy maintsy mitandrina ianao rehefa manova ny raikipohy, satria mety hiova arak'izay ny toetra lo ao amin'ny AC.
Ny AC misy eo amin'ny sehatry ny indostria dia manana naoty maro, tsy amin'ny resaka haben'ny sombiny sy ny rafitra fampavitrihana ihany, fa amin'ny resaka fluidity ihany koa. Ohatra, ny fampidirana additive amin'ny AC dia mety hampitombo ny fluidity sy ny fanaparitahana ny vovony AC. Ity karazana AC ity dia tena mety amin'ny plastisol PVC. Satria ny mpiasan'ny foam dia afaka miparitaka tanteraka ao amin'ny plastisol, ity dia olana iray lehibe amin'ny kalitaon'ny vokatra farany vita amin'ny plastika. Ho fanampin'ny fampiasana naoty misy fluidity tsara, ny AC koa dia azo aparitaka amin'ny rafitra phthalate na mpitatitra hafa. Ho mora ny mitantana toy ny ranoka.